Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Kanada: Via Rail Update ho valin'ny COVID-19
Ho fanohanana ny ezaka mitohy ataon'ny manampahefana misahana ny fahasalamam-bahoaka manerana an'i Canada hamerana ny fampielezana COVID-19, ao anatin'izany ny tolo-kevitra momba ny halavirana ara-tsosialy ary mba hampihenana bebe kokoa ny risika ara-pahasalamana ho an'ireo mpandeha sy mpiasanay, VIA Rail Canada (VIA Rail) dia nanambara fa mihena ny sasany amin'ireo tolotra misy azy ary koa ny fepetra fisorohana fanampiny.
Vokatry ny fihenan'ny volan'ny mpandeha izay niainana tamin'ny herinandro lasa teo, ampiarahana amin'ny filàna ny fanaparitahana ny loharanom-bolantsika hahay hiatrika ny areti-mandringana amin'ny fomba mahomby. Talata, Martsa 17, hahena 50% ny serivisy ao amin'ny lalantsara Québec City-Windsor.
Serivisy isam-paritra (Sudbury-Renirano fotsy, Winnipeg-Churchill, Senneterre-Jonquière) dia hanohy hiasa arakaraka ny fandaharam-potoanany avy ary tsy misy fiovana.
Ary koa ny fiovan'ny fandaharam-potoana, ny VIA Rail dia hampiditra serivisy fisakafoanana novaina ao anaty fiaran-dalamby. Mifanaraka amin'ny torolàlana momba ny lavitra eo amin'ny lafiny ara-tsosialin'ny manampahefana ara-pahasalamana, dia hoferantsika farafahakeliny ny habetsaky ny mpiasa sy ny fifandraisan'ny mpandeha, ao anatin'izany ny serivisy fisakafoananay. Ireo mpandeha amin'ny kilasy toekarena dia hahazo mofomamy sy rano maimaimpoana. Amin'ny kilasy fandraharahana, ny serivisy fisakafoanana mahazatra dia soloina sakafo kely sy rano. Amin'ireo kilasy roa ireo dia tsy misy tolotra sakafo na zava-pisotro hafa atolotra ary ny mpandeha misy fameperana sakafo angatahina mba hanao drafitra mifanaraka amin'izany.
Ny mpiasa an-tsambo fanampiny dia haparitaka amin'ny fiaran-dalamby rehetra mba hanadiovana ireo fiaran-dalamby raha mbola miasa. Izany dia ankoatry ny protokolan'ny fanadiovana nohatsaraina teo aloha izay mihatra amin'ny gara. Via Rail dia manohy mametraka protokolan'ny fahadiovana sy fidiovana fanampiny ho an'ireo lamasinina hafa miasa raha mbola ampiasaina izy ireo.
Ireo mpandeha izay mampiseho soritr'aretina mitovy amin'ny sery na gripa (tazo, kohaka, aretin-tenda, fahasahiranana amin'ny fifohana rivotra) dia angatahina tsy handeha amin'ny sambo VIA Rail. Raha mipoitra eny amin'ny sambo ireo soritr'aretina ireo dia angatahina izy ireo hilaza izany amin'ny mpiasa iray avy hatrany.
"Amin'ny maha serivisy fitateram-bahoaka ho an'ny Kanadiana rehetra, dia manolo-tena hatrany izahay hanome serivisy betsaka araka izay azo atao ao anatin'ny tarehin-javatra, ary koa tontolo iainana mandeha lavitra ho an'ny mpanjifantsika sy ny mpiasanay. Satria efa mahita fihenam-bidy lehibe amin'ny fitaterana isika, ireo fepetra fanampiny ireo dia hanampy antsika hitazona ny serivisy ", hoy izy Cynthia Garneau, Filoha sy CEO.
“Mampiasà ireo fitandremana fanampiny ireo izahay amin'ny fahafantarana fa hisy fiatraikany amin'ny fahafahantsika mihazakazaka ara-potoana ny fiaran-dalamby. Misaotra ny mpandeha izahay noho ny faharetany sy ny fahatakaran'izy ireo nandritra io vanim-potoana sarotra io ho an'ny Kanadiana rehetra ary tianay ho fantatr'izy ireo fa izahay rehetra ao amin'ny VIA Rail dia manolo-tena hanolotra serivisy sy tolotra tsara indrindra mety indrindra, indrindra ny ao anaty fiaran-dalamby, any amin'ireo gara misy anay ary ireo ivon-toerana fiantsoana anay ”, hoy hatrany Cynthia Garneau. "Mandra-piverenan'ny toe-draharaha ara-dalàna, dia manasa ny mpandeha rehetra izahay mba hijery ny tranonkalantsika hahazoana ny fanavaozana farany momba ny asanay".
Ny VIA Rail dia manohy manara-maso akaiky ny fivoaran'ny COVID-19 ary mifandray akaiky amin'ny maso ivoho ara-pahasalamana sy ny governemanta federaly sy ny faritany izahay.
Topimaso momba ny serivisy *
hatramin'ny 27 martsa
Serivisy tsy tapaka
Ireo mpandeha misafidy ny hanova ny drafitry ny dia hataony dia honenana. Ho an'ny fahalalahana faran'izay betsaka, ny mpandeha dia afaka manafoana na manova ny famandrihany amin'ny ora rehetra alohan'ny fiaingany mandritra ny volana martsa sy aprily ary mahazo tamberim-bola feno ankoatry ny tsy fandoavam-bola, na oviana na oviana izy ireo no nividy ny tapakilan'izy ireo. Anisan'izany ny fitsangatsanganana rehetra hatramin'ny Aprily 30, 2020, ary koa ny dia rehetra aorian'izay Aprily 30, 2020, raha ny fiaran-dalamby ataon'izy ireo dia eo alohan'izay Aprily 30, 2020.
Koa satria Marsa 13, ireo fiovana amin'ny serivisinay ireo dia miteraka fanafoanana ireo lamasinina miisa 388 ary misy fiatraikany amin'ny mpandeha 20 000 mahery.